Vista's Colorful Planet: 12.12.12
12.12.12 အတွက် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘဝလေးကို ပုံလေးတွေ ခြေရာချန်ခဲ့တာလေး ကြည်နူးစွာကြည့်သွားပါတယ် Vista :)
ဗစ် လည်း ပေးတဲ့ဆုတွေ အားလုံးပြည့်စုံပါစေ.။
ပုံလေးတွေနဲ့ဆုတောင်း ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ :)
အတူတကွ နေထိုင်ကလည်း တူညားဗိုက်ပေါ်ခုန်တက် hit2
I will jump on Mho ma bite LOL
ka taut ... hit (big) 5
btw .... "ပျော်ရွှင်ကြပါစေ !!" ဆိုတာ
ညိုလေး ပြောသလိုပဲ... ပုံလေးတွေက အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။
စကားမစပ်... မဗစ် ထီးလာယူဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။ ရှေ့လကုန်ရင် ဇွန်တို့ အိမ်ပြောင်းတော့မှာ။း)
Those pic are so cute.. do not look like vista :D
Happy ending with tiwns in 100-acre wood/100-servers-room.
ပုံများနှင့် စကားပြောရင်း ရွှင်စေခဲ့ ...
ကာတွန်း ရုပ် လေး တွေ ချစ် ဘို့ ကောင်း တယ်.. စိတ်ကူး ကောင်း ကောင်း နဲ့ ရက်ထူး နေ့ မှာ ဆုတောင်း လေး ရေး ထား တာ သ ဘော ကျ တယ်။
photoshop နဲ့ ကိုယ် တိုင် ဆွဲ ထား တာ လား
ပျော်ရွင် ပါ စေ
ချစ်သူခင်သူ ဘော်ဒါနှစ်ယောက်မှာ ဝမ်းနည်းနေပုံရတဲ့ တစ်ယောက်ကို နောက်တစ်ယောက်က ပခုံးလေးဖက်ပြီး ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ နှစ်သိမ့်နေတာလေး သဘောကျလိုက်တာ...၊
That's what friends are for..... နော။း))
ဇွန် ..လာယူမယ်နော် .. မွ
ကန်ဒီ ဟုတ်တယ် တို့ လည်း အရမ်းချစ်တယ် အဲကောင်လေးတွေ
ပွတ်ဆိတ်တော့ လက်နဲ့ ဖိလိုက်သေအုံးမယ်
ကျေးဇူးပါ ငြိမ်းစိုးဦးး)
ကိုအောင် ဖုန်းထဲက ပုံတွေပါ ဖြတ်ထည့်ထားတာ ဟီး
ကိုညီ ဟုတ်တယ် တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့ ဝမ်းနည်းနေလို့ နှစ်သိမ့်နေကြရတာပဲလေ အလှည့်နဲ့ ပေ့ါ
၁၂.၁၂.၂၀၁၂ မှာ အဘွားဆုံးသွားတယ် ...
း( မမယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး .. ဒါမယ့်လည်း အဘွားက မောဒန် အဘွားလို့ တော့ပြောလိုက်ချင်သေးတယ်း) ၊ တနေ့ ကိုယ်တွေလည်း သွားရမယ့်လမ်းမို့...စိတ်အေးအေးသာထားပါလေ .. ၂၁ ရက်တောင် သွားရမလား မသိ .. ကပ်နေပီး)
Happy Christmas Bit :)